HORSEEDKII NABADAYNTA W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar |
HORSEEDKII NABADAYNTA W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar
“Nabaddu waa isku kalsooni, xasillooni iyo miyir-qab. Waa furaha suureeya nolosha. Waxay leedahay kal caafimaad-qabta iyo kaalin-qaadasho. Waa naxariis, kalgacal iyo heellanaan qofka kashiisa iyo ereygiisaba debcisa. Waxay fursad siisaa waajibaadka. Waa dareen miyir iyo miisaan leh oo lagu seexdo, laguna soo tooso. Waa naawilka nolol habhaban oo mar walba qofka hiyigiisa nadiifisa. Ugu dambayntiina, Nabaddu waxay horseeddaa horumar iyo guulo la gaadho.” – (Hadraawi, 2012)[i].
Nabadda Somaliland waxa fure u ahaa hub-ka-dhigistii meelayshiyooyinkii beelaha oo suurtogalisay abuurista ciidamada qaranka Somaliland. Hub-ka-dhigista waxa horseed ka ahaa halyeeyo badan oo aan la hilmaami karin. Halyeeyadaa waxa ka mid ahaa ama ugu mudnaa Suldaan Maxamed Suldaan Faarax.